Ogaden News Agency (ONA) – Hay’adda Daryeelka Hooyooyinka iyo Dhalaanka Ogaden (OMCR) oo ka qaybgalay shirweynaha haweenka Muslimiinta
Hay’adda Daryeelka Hooyooyinka iyo Dhalaanka Ogaden (OMCR) oo ka qaybgalay shirweynaha haweenka Muslimiinta
Hay’adda Daryeelka Hooyooyinka iyo Dhalaanka Ogaden ee magaceeda loosoo gaabiyo OMCR (Ogaden Mother and Child Relief) ayaa maalmihii Sabtida iyo Axada ee ay tariikhdu ahayd 20-21 ee bishan April ka qaybgalay kulan aad u balaadhan oo ahaa shirweynihii sanadlaha ahaa ee Haweenka Muslimiinta Australia oo ka dhacayay magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Shirwaynahan ayaa waxaa kasoo qayb galay kumanaan dad ah oo kasoo kala jeeda qowmiyado kala gadisan, dhaqamo kala gadisan, iyo da’aad kala duwan. Kulanka oo ahaa mid lagu guulaystay ujeedadii laga lahaa ayaa waxaa ka hadlay dadyoow kala duwan oo ka socday gobolada iyo dawladda federaalka ee Australi.
Kasoo qaybgalayaashii kulankan ayaa waxaa si wayn usoo jiitay wacyi-galintii ay samaynayeen kooxdii ka socotay hay’adda Ogaden Mother and Child Relief (OMCR) oo oga warbixnayay dadka xaaladda qalafsan ee ay ku sugan yihiin hooyooyinka iyo dhalaanka Ogaadeenya ee lagasoo baro kiciyay guryahoodii lana xaq-duudsiyay.
Gabdhaha matalayay ururka OMCR ayaa gaadhsiiyay dhibaatada haysata barakacayaasha kumanaan kami dha dadkii kasoo qaybgalay shirweynaha iyagoo u sheegay sida ay dakaasi ugu baahan yihiin gargaar deg deg ah. Fadlan booqo bogga hay’adda oo ah www.omcrelief.org si aad uga bogato wixii meesha ka dhacay.